Imidlalo eyi-10 engcono kakhulu yokusinda ye-PC | Izindaba zamagajethi
Uhlobo lokusinda selusabalale kakhulu eminyakeni yamuva nje, amandla akhulayo ama-PC ethu kanye nezinjini zemidwebo eziqhubeka zicwengisiswa zigcwalise uhlobo lokuphila nokuhlukahluka okungangabazeki ukuthi kunabalandeli abaningi. Sinakho kusukela lapho Thumela imihlaba ye-apocalyptic ihlaselwe ama-Zombies, ama-space odysseys, ukuphuka kwemikhumbi olwandle oluphakeme, ngisho nesikhathi seminyaka yama-dinosaurs. Imihlaba ehlukene ehambisana nephethini efanayo, ukusinda njengenhloso kuphela yokufeza.
Kulesi sihloko sifuna ukubuyekeza abayi-10 abathi ngokombono wethu bamake uhlobo lomculo kakhulu, olukwazi ukusigcina sibambeke izinyanga, sisenkampanini futhi sisodwa, okwenza isipiliyoni sethu sibe yinto ejabulisayo. Noma yini ihamba inqobo nje uma usinda, uzingela, wakha, ubaleka, udla, ulale futhi ngaphezu kwakho konke ulwa nanoma ibuphi ubunzima. Ngaphezu kokubambisana, into ngokungangabazeki ezokwenza izinto zibe lula kakhulu kithina kulolu hlobo lomdlalo wevidiyo othokozisayo. Hlala nathi ngezibonelo eziyi-10 ezinhle kakhulu zokusinda ze-PC.
1 Umphongolo: Ukusinda Kwashintsha
4 Ukuthunjwa kwe-Conan
7 Isihogo Esiluhlaza Okotshani
Umphongolo: Ukusinda Kwashintsha
Iminyaka yama-dinosaurs ibuyela ezimpilweni zethu ngalo mdlalo othokozisayo wokusinda komuntu wokuqala. Akuwona umdlalo wevidiyo ocwengisiswe kakhulu emakethe, kepha uma kungenye yezidume kakhulu futhi kumnandi eminyakeni yamuva. Inezici eziningi ezenza ukuthuthuka kwayo kube kuhle futhi kube nesipiliyoni sokucebisa sokusinda nokwenza. Konke kwenzeka esiqhingini esiyingozi esigcwele izibankwakazi.
Umdlalo umhlaba ovulekile, ngakho-ke sinemephu yonke evuliwe kusukela ekuqaleni, Iqale njengomdlalo wokufinyelela kusenesikhathi ngakho-ke abasebenzisi bokuqala bahlushwa izimbungulu ezingapheli lokho kuvimbele ukuyijabulela ngokujulile. Manje sibhekene ne-adventure lapho ukuhlala siphephile kuzodingeka sikwenze thola ukudla namanzi, uvumelane nezinguquko ezingazelelwe ekushiseni.
Noma singanqamula, isimilo sethu sizohlala sicwile emhlabeni, ngakho-ke kubalulekile ukwakha indawo yokukhosela lapho singachitha khona ubusuku siphephile ezingozini ezikule ndawo. Singazilimela ukudla kwethu futhi yakha isizwe nezinye izakhamiziLokhu kunconywa kakhulu njengoba ukubambisana kungasindisa izimpilo zethu.
Umdlalo ohlukile futhi oyingqayizivele njenganoma yimuphi omunye, lapho sithola khona izwe elihle elingaphansi kwamanzi lapho kufanele singene khona, liyigugu njengoba liyingozi. Sizongena ezweni lomfokazi elingaphansi kwamanzi lapho impilo yazo zonke izinhlobo zezidalwa ichichima. Umsebenzi wethu kuzoba ukusinda kuzo zonke izingozi ezifihliwe, phakathi kwazo izilwane ezivelele, okubulala kakhulu kunokuba kungabonakala ekuqaleni.
Sizoba nentshisekelo yokuthola isiphephelo lapho singaphumula khona futhi kulokhu sizobheka izinsiza kuyo yonke imephu ebanzi. Singazakhela izimoto zethu ukwenza uhambo olude lubekezeleleke futhi sigweme lezi zidalwa eziyingozi ecathamela kuwo wonke amagumbi. I-Subnautica ngumdlalo onconywe kakhulu uma ufuna ukujabulela isipiliyoni esihle futhi esiyingozi.
Yini embi kakhulu engenzeka kuwe lapho usinda engozini yendiza embi? Sizocabanga ukuthi ngemuva kokuthola leyo ngozi akukho okwenzeka kithi okungaba kubi kakhulu, kepha umlingisi wethu omkhulu unenhlanhla embi yokungena ihlathi elikhulu eligcwele amazimu atshintshayo, ngesitayela esimsulwa amagquma anamehlo. Umdlalo awusiniki ukuthula, ngoba ngaso sonke isikhathi sinomuzwa wokuthi kukhona okusibhekile futhi isizosihlasela. Sizizwa singaphephile, asikwazi ukwehlisa ukuqapha kwethu ngoba nganoma yisiphi isikhathi kuzodingeka sibaleke noma sibhekane nokulwa.
Le adventure inezingozi ngemuva kwesihlahla ngasinye, izingozi okufanele sibhekane nazo, insiza enhle yokulwa nalokhu ukwakhiwa kwezikhali. Sizokwakha amakamu ethu nemililo yethu yokulwa namakhaza. Kepha asikwazi ukufihla unomphela, njengoba sizodinga ukuhlola ukuqoqa izimpahla nezinsizakusebenza ukuze siqhubeke nokuchuma kulo mdlalo.
Njengoba igama liphakamisa, lo mdlalo unjalo ngokuya ngomkhathi kaConan the Barbarian. Izwe lapho kuzodingeka silwele ukubuyisa inkazimulo yomndeni wethu futhi sinqobe izindawo ezingaphezulu kakhulu. Ukufeza inhloso yethu kufanele sihlole umhlaba ocebile ogcwele izinto nezindawo ezigcwele izinsiza, kepha njalo ukunaka isimo sezulu njengoba kokubili ukubanda nokushisa kungabulala. Sizobhekana nezitha zabantu ezinonya kodwa nezidalwa.
Ekuqaleni kungabonakala njengomdlalo oyisisekelo lapho silwa khona futhi siphumule, kepha umhlaba wayo ugcwele amakhona lapho sizothola khona izimfihlo eziningi ezifihliwe. Kuzofanele sibhekane nezimpi phakathi kwamaqembu, ukuvinjezelwa, ukwakhiwa kwamadolobha nokuzivikela kwawo. Uma ungumuntu othanda indawo yonke yeConan, lo mdlalo uzokwenza uchithe amahora omnandi.
Omunye wamaphayona wohlobo lokusinda ku-PC, owaziwayo futhi odume kakhulu kubalandeli be- umhlaba we-apocalyptic ohlaselwe ubhubhane lwe-zombie. Imidlalo yabo iku-inthanethi ngokuphelele, lapho sizohlangana khona nabasebenzisi abavela kuwo wonke umhlaba, kepha futhi singadlala nabangane bethu futhi sakhe iqembu elihle lokuzivikela bobabili abangasekho abafuna ukusishwabadela, kanye nezitha ezingabantu ezizofuna ukusiphanga ukugcina konke esesikuzuzile.
IChernarus, indawo yalo mdlalo umhlaba ohlaselwe ukushiywa nokunganakwa kwezakhamizi zayo ngenxa yobhadane elihlaselwe yilo, lapho okusele kuphela emigwaqeni yalo ukungafi. Kumele siphile futhi siqaphele amanxeba ethu ngoba angatheleleka noma abambe nezifo. Isimo sezulu naso sibalulekile futhi kuzofanele sizakhele izindlu zethu zokukhosela, ngoba izoba ngenye yezindawo ezimbalwa lapho singaphepha khona ngokuphelele. Okubi kuphela ngumphakathi, Ukugcinwa ngabathuthukisi kubi futhi abanye abasebenzisi bahlanganyela kuma-hacks ukucasula kwabanye abasebenzisi.
Okungafuneki nokwengeziwe komhlaba okonakaliswe ubhadane, yikhadi lokushaya lalo mdlalo wevidiyo osinda. Kulokhu, umdlalo ngamunye wehlukile, ngoba isikhathi ngasinye lapho siqala izinhloso zokuzuza futhi izakhamizi zizohluka.. Hhayi nje kuphela ukuthi kuzodingeka sibhekane namaZombi ukuze siphile, kuzofanele futhi sinake kakhulu abanye abantu abazofuna ukuphanga indawo yethu yokuhlala.
Umdlalo uku-inthanethi kepha uhlangothi olulodwa lomdlali lumnandi futhi lunomvuzo. Kungakuhle ukuthi uyidlale ku-inthanethi nabanye abangane futhi ubambisane ukwenza lokho okuhlangenwe nakho kube okujule ngokwengeziwe, lapho ukwabelana nokulwa ngokujoyina amabutho kuzoba yimpahla yethu enhle kakhulu. Kukho konke lokhu sizohlala sithola imiklomelo, okuzosenza sithuthuke futhi sibe nomuzwa wokuthi isikhathi ngasinye lapho sidlala sithuthukile kancane.
Isihogo Esiluhlaza Okotshani
Isihogo esiluhlaza njengoba isihloko sisitshela, lo mdlalo wevidiyo unjalo isethwe ehlathini lase-Amazon. Sizoba sodwa ngokuphelele kule ndawo enhle kodwa ngasikhathi sinye esesabekayo, lapho umsebenzi wethu omkhulu kuzoba ukulwela ukusinda. Kuzofanele siphathe hhayi nje kuphela ukudala umlilo ukuzipheka noma ukuzifudumeza, kuzofanele futhi sithole indlela yokwakha indawo yethu yokuhlala noma ukuyenza emhumeni, nengozi okubandakanya lokhu.
Kubukeka njengomdlalo wokusinda obekwe ehlathini, size siqonde ukuthi umlingisi wethu omkhulu ulahlekelwa yingqondo. Masithi icindezelwa ngokuphelele esimweni salolu hlaka. Hhayi nje ukuthi singabulawa yindlala, kepha futhi kuzofanele sipholise noma yimaphi amanxeba noma ukugula okungenzeka sinakho. Kubandakanya uhlelo lokuhlola umzimba olunothile, olwenza kube lula kakhulu ukuthi silulaphe. Singakujabulela ukuzijabulisa sodwa noma abadlali abaningi ababambisanayo.
E-Rust i-adventure iqala njengoba uNkulunkulu asiletha emhlabeni, unqunu ngokuphelele, oveza isidingo esibalulekile sokuqhubekela phambili ukudambisa isimo. Sizobheka amatshe nezingodo zokubasa umlilo, sisebenzise inyama ukuzondla thina nezikhumba zokugqoka. Lokhu kubonakala kulula, kepha umdlalo ugcwele abanye abasebenzisi babantu ikakhulu abafuna nje ukusiphanga. Ngakho-ke kufanele silwe nabo ukuze sinqobe.
Izilwane zasendle nabantu bahlala njalo eRust, ngakho-ke kuzofanele sakhe idolobhana lethu futhi siliqinise ukuze sizivikele kulo. Kungumdlalo oku-inthanethi ngakho-ke abantu bangabanye abadlali abavela emhlabeni jikelele. Ukhiye ukwenza izinto ngobuciko, ngokugxila okusobala ekwakhiweni. Njengoba siqhubekela phambili sizokubona lokho inketho enhle kakhulu ukwakha ubuhlobo nabanye abadlali ukulwa ndawonye ngazo zonke izingozi nokwabelana ngezinsizakusebenza.
Umdlalo wevidiyo othandwa kakhulu ngaso sonke isikhathi, ngaphandle kokungabaza isibonelo esihle kakhulu sokuthandwa kwalolu hlobo. Kungumdlalo omuhle wazo zonke izethameli kepha ugcwele ubutha. Isici salesi sihloko ngokungangabazeki ukwakhiwa kwezinto nokwakhiwa kwengqalasizinda. Lapho konke kubonakala kuthulile, singangenelwa yizitha, kusuka ezidalweni kuya kwabanye abasebenzisi.
Izigaba ezingenakubalwa zezitha zihlala emhlabeni wayo omkhulu, ngakho-ke kulula ukusebenzisa wonke umzuzu ukuqoqa izinsiza eziningi ngangokunokwenzeka. Ukuhlola kungenye yezinto ezibaluleke kakhulu zomdlaloNjengoba kuncike ekutheni siyakwazi yini ukuthuthuka, sizongena emgodini omningi futhi ngalokhu kuzodingeka sizilungiselele kahle, zombili izikhali nezikhali.
Siphetha uhlu ngokuhlukile kokunye, umdlalo we-intergalactic lapho esihlola khona kungamaplanethi ayisikhombisa avela kolunye uhlelo lwelanga. Sizoba nekhono lokuguqula isimo sendawo futhi sihlole wonke amasentimitha eplanethi ngayinye njengoba sithanda. Kuzoba kubaluleke kakhulu ukuqoqa zonke izinhlobo zezinsizakusebenza njengokujwayelekile kulolu hlobo, kanye nokwakha izimoto noma izisekelo zokuphumula.
Njengamalungu amaningi alolu hlu, ingadlalwa ngokubambisana, okuzokhulisa kakhulu izinketho zomdlalo. Hhayi nje kuphela ukuthi singahlola ngaphezulu, futhi sizoba nomhlaba ongaphansi komhlaba lapho kuzofihlwa khona amagugu abalulekile kanye nezinto zokuthuthukisa umkhumbi wethu.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ikhaya » Imidlalo yevidiyo » Imidlalo eyi-10 engcono kakhulu yokusinda ye-PC
Sawubona kusihlwa, angazi noma ngabe lena indawo efanelekile yokuphawula ngalokhu, uma kungenjalo, ngiyaxolisa! Iqiniso ukuthi nabangane bami sidlala ukuba ngabaseshi abazimele eBarcelona futhi njengoba sesisekhaya sifuna ukudlala umdlalo othile wabaseshi we-pc, ungancoma owodwa? Siphenya kumawebhusayithi amaningi futhi asikwazi ukuwathola. Ngiyabonga!!
I-Huawei MatePad, ukuhlaziywa: Ithebhulethi emele i-iPad